जापानमा भूकम्प र ज्वालामुखीहरु - Best of Japan
होक्काइडो = एडोब स्टकमा जंगली भालुहरू
जापानमा भूकम्प प्रायः देखा पर्छ, साना भूकम्पदेखि लिएर ठूलो घातक प्रकोपसम्म। धेरै जापानीहरु प्राकृतिक संकटहरू कहिले हुन्छ भनेर थाहा नहुने स crisis्कटको भावना महसुस गर्छन्। अवश्य पनि, वास्तवमा ठूलो प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्ने सम्भावना धेरै कम छ। धेरै जसो जापानी मानिसहरु 80० बर्ष भन्दा माथिको उमेर भन्दा बढी बाँच्न सक्षम भएका छन्। यद्यपि स crisis्कटको यो भावनाले जापानको भावनामा ठूलो प्रभाव पार्छ। मानिसहरूले प्रकृतिलाई जित्न सक्दैनन्। धेरै जापानी मानिसहरु यो प्रकृति संग संग रहन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने महसुस गर्छन्। यस लेखमा म तुलनात्मक रूपमा भर्खरको भूकम्प र ज्वालामुखी विस्फोटको बारेमा चर्चा गर्नेछु।
जापान मा भोलकनोस
यदि तपाईं जापानमा केहि बर्ष रहनुभयो भने, तपाईंले कम्तिमा एउटा सानो भूकम्प आफैले अनुभव गर्नुपर्नेछ। जापानी भवनहरू भत्काउनको लागि डिजाइन गरिएको छ यदि ठूलो भूकम्प आयो भने पनि। त्यसकारण डराउनुपर्दैन। जे होस्, यदि तपाईं जापानमा दशकौंसम्म बस्नुभयो भने, ठूलो भूकम्पको अनुभव हुने सम्भावना छ। २०११ मा, जब ग्रेट इस्ट जापान महान भूकम्प भयो, म टोकियोको गगनचुम्बी भवनमा काम गर्दै थिएँ र हिंसाले थरथर हल्लाउँदै भवनको अनुभव गरे।
पूर्वी जापान ठूलो भूकम्प प्रकोप
पूर्वी जापान ठूलो भूकम्प प्रकोप, मार्च ११, २०११
ग्रेट ईस्ट जापान भूकम्प (हिगाशी-निहोन दाइसिन्साई) एउटा एकदम ठुलो भूकम्प हो जुन मार्च ११, २०११ मा उत्तरी होन्शुमा लाग्यो। करिब १ 11,००० पीडितमध्ये 2011 ०% भन्दा बढी सुनामीको कारण मरे।
सन् १ 1995 XNUMX occurred मा भएको ठूलो हान्शिन भूकम्प पछि भूकम्पको कारण भवनहरू भत्किनबाट जोगिन जापानमा भूकम्प प्रुफ निर्माण सक्रियपूर्वक गरिएको छ। यसको कारणले गर्दा, ग्रेट इस्ट जापान भूकम्पमा, त्यहाँ धेरै भवनहरू थिएनन् जुन भूकम्पबाट ध्वस्त भयो। यद्यपि सुनामीले पछि ठूलो क्षति पुर्‍यायो।
सुनामीले फुकुशिमा प्रान्तमा आणविक ऊर्जा संयंत्र पनि प्रहार गर्‍यो। नतिजा स्वरूप, तीन आणविक रिएक्टरहरू पग्लिए र रेडियोएक्टिव चुहावट भयो। करीव १ 150,000०,००० व्यक्ति वरपरका क्षेत्रहरू खाली गर्न बाध्य भए।
जापानमा एउटा उखान छ "जब हामी अन्तिम बिर्सन्छौं तब ठूलो प्राकृतिक प्रकोप आउँछ।"
एउटा। "वास्तवमा १०० बर्ष भन्दा अघि होनुको उत्तरी भागमा ठूलो सुनामी आएको थियो। तथापि, हामी सुनामीको डरलाई बिर्सेका छौं।
आणविक उर्जा संयंत्र ठूलो सुनामीले चलेको छ भने पनि आयोजित गर्न डिजाइन गरिएको थियो, तर सुनामीले आणविक शक्ति प्लान्टलाई जे भए पनि नष्ट गर्‍यो। यो प्रकोपको अनुभव गरेर जापानीहरूले फेरि प्रकृतिको डर महसुस गरे।
महान हानशिन भूकम्प
१ 1995 XNUMX in मा कोबे ग्रेट हन्शिन भूकम्पबाट भग्नावशेषहरू कोबे भूकम्प मेमोरियल पार्क, ह्योगो प्रान्त, पोर्ट अफ जापानमा प्रकृतिको विनाशकारी शक्तिका लागि अनुस्मारकको रूपमा सुरक्षित गरियो = शटरस्टक
ग्रेट हन्शिन भूकम्प (ग्रेट हन्शिन भूकम्प) जनवरी १ 17, १ 1995 30 on मा कोबे र वरपरका ठाउँहरूमा ठुलो भूकम्प हो। कोबे ओसाकाबाट करीव 6,000० किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित एउटा ठूलो सहर हो। यो ठूलो भूकम्पमा XNUMX,००० भन्दा बढी मानिस मरे।
म १ 1994 XNUMX until सम्म कोबेमा धेरै वर्ष बसेको थिएँ। जब यो भूकम्प गयो, म टोकियोमा बस्दै थिएँ। जब मैले भूकम्पको खबर सुनेँ, म छिटो कोबे गएँ। कोबे शहर, जुन मलाई मन पर्यो, भूकम्पबाट पूरै बदलिएको थियो।
यो ठूलो भूकम्प धेरै जापानी मानिसहरु लाई एक सदमेको थियो। किनभने भूकम्पले आधुनिक राजमार्गहरू र भवनहरू नष्ट गर्‍यो, जापानीहरूले प्रकृतिको डरलाई बिर्सिदिए। यो भूकम्प पछि, जापानमा भवनहरू, सडकहरू, इत्यादीहरूको भूकंपीय सुदृढीकरण कार्यहरू उन्नत भए।
महान क्यान्टो भूकम्प
१ 1923 २4 टोकियो भूकम्प पछि जलेको स्ट्रीटकारहरूको भग्नावशेष महान क्यान्टो भूकम्पको रिपोर्ट गरिएको अवधि and र १० मिनेटको बीचमा सेप्टेम्बर। = शटरस्टक
ग्रेट कान्टो भूकम्प एक ठूलो भूकम्प हो जुन सेप्टेम्बर १, १ 1 २1923 मा टोकियोलगायत कन्टो क्षेत्रमा प्रहार गर्‍यो। करीव १ 140,000०,००० मानिस मरे। त्यस समयमा टोकियोको डाउनटाउन क्षेत्रमा त्यहाँ थुप्रै रूखहरू र घरहरू थिए। जब भूकम्प गयो, मानिसहरूले खाना पकाउन आगोको प्रयोग गर्थे। घरहरू आगोले जलेर जलाएपछि धेरै मानिसहरू जलाइए। यस भूकम्पमा टोकियोले ठूलो क्षति बेहोरेको छ। अर्थव्यवस्था बिग्रियो, जसले राजनीतिक उथलपुथल र सेनाको उदय पनि पुर्‍यायो।
पग्लिएको लाभा सकुराजिमा कागोशिमा जापान = शटरस्टकबाट फुट्छ
जापानमा लगभग १०० सक्रिय ज्वालामुखी छन्। मुख्य ज्वालामुखीहरू निम्नानुसार छन्।
माउन्ट फुजी: यो ज्वालामुखी हालै १ 1707०XNUMX मा भस्म भयो।
ताइत्सुजन: 30,000०,००० वर्ष पहिले ठूलो विस्फोटन भएको थियो।
माउन्ट Usu: माउंट Usu हरेक years० बर्षमा एक पटकको गतिमा erup को रूप लिन्छ।
माउन्ट असामा: यो पहाडमा दोहोरिन साना विस्फोटहरू भएको छ।
अनझेन भोलोकानो: एउटा ठूलो पाइरोक्लास्टिक प्रवाह १ 1991 XNUMX १ मा भयो।
माउन्ट Aso: यदि ज्वालामुखी गतिविधि व्यवस्थित गरियो भने, तपाईं क्रेटरको नजिक जान सक्नुहुन्छ।
किरिशिमा: ज्वालामुखी गतिविधि अझै जारी छ।
सकुराजिमा: सकुराजिमाले सानो विस्फोटहरू दोहोर्याउँदछ।
माउन्ट ओन्टेक विस्फोटन
माउन्ट ओन्टेक विस्फोट पछि = शटरस्टक
सेप्टेम्बर २,, २०१ 27 मा, माउन्ट। Ontake (Ontake- सान) अचानक 2014 वर्षमा पहिलो पटक देखा पर्‍यो। यो विस्फोट साँच्चै अचानक थियो र चेतावनी बिना आयो। पहाडको टुप्पा नजिक भएका करीव cl० पर्वतारोही विस्फोटको कारण हराए। यो जापानको उत्तर युगमा सबैभन्दा खराब ज्वालामुखी प्रकोप थियो।
माउन्ट ओन्टेकको उचाई 3067०XNUMX। मीटर छ। धेरै अघिदेखि धेरै मानिसहरूले यसलाई विश्वासको पहाडका रूपमा मान्यता दिएका छन्। यो विस्फोट पछि, जापानी सरकारले देशव्यापी ज्वालामुखीहरु को अनुगमन मजबूत बनाएको छ।
भूकम्प र ज्वालामुखी सम्बन्धी जानकारीको लागि कृपया जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीको आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्।
>> जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीको आधिकारिक वेबसाइटको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
त्यहाँ तल सम्बन्धित लेखहरू छन्।
जापानमा पनि टाइफून र भारी वर्षाबाट हुने क्षति विश्वव्यापी तापक्रमका कारण बढ्दो छ। थप रूपमा, भूकम्प प्राय: जापानमा हुन्छ। यदि तपाईंले जापानमा यात्रा गरिरहनु भएको बेला आँधी वा भूकम्प आयो भने तपाईंले के गर्नुपर्छ? अवश्य पनि, तपाईले त्यस्तो केसको सम्भावना देख्नुहुन्न। जे होस्, यो आपतकालको स्थितिमा काउन्टरमेजरहरू जान्न राम्रो विचार हो। त्यसो भए, यस पृष्ठमा, म जापानमा प्राकृतिक प्रकोप आउँदा के गर्ने भनेर छलफल गर्नेछु। यदि तपाईं अहिले आँधी वा ठूलो भूकम्पले ग्रस्त हुनुहुन्छ भने, जापानी सरकारी अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् "सुरक्षा सल्लाहहरू"। त्यस तरीकाले तपाईले भर्खरको जानकारी पाउनुहुन्छ। जे भए पनि, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग शरण लिनको लागि एक सुरक्षित ठाउँ छ। तपाईंको वरिपरिको जापानी मानिससँग कुरा गर्नुहोस्। यद्यपि, सामान्यतया जापानी व्यक्तिहरू अ speaking्ग्रेजी बोल्नमा राम्रो छैनन्, यदि तपाईं समस्यामा हुनुहुन्छ भने तिनीहरू अझै पनि मद्दत गर्न चाहन्छन्। यदि तपाईं कांजी (चिनियाँ वर्णहरू) प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भने, तपाईं तिनीहरूसँग यस तरीकाले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। सामग्रीको तालिका मौसम र भूकम्पको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् सिफारिश गरिएको मिडिया र अनुप्रयोगहरू मौसम र भूकम्पको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्मी टाइफुन ओकिनावा एयरपोर्टलाई कुट्ने = शटरस्टक मौसम पूर्वानुमानमा ध्यान दिनुहोस्! मलाई विदेशबाट आएका यात्रुहरूले भनेको छ कि "जापानी मानिसहरु मौसम पूर्वानुमान मन पराउँछन्।" निश्चित रूपमा हामी मौसमको पूर्वानुमान हरेक दिन जाँच गर्दछौं। यो किनभने जापानी मौसम हरेक क्षण परिवर्तन हुन्छ। जापानमा मौसमी परिवर्तनका साथै टाइफुनहरू प्रायः गर्मी देखि शरद .तुसम्म हुन्छन्। यसबाहेक, हालसालै ग्लोबल वार्मिंगको प्रभावका कारण भारी वर्षाबाट हुने क्षति बढेको छ। थप रूपमा, भूकम्प र ज्वालामुखी विस्फोटहरू देखा पर्दछ ...
जापानी टापुमा प्रकृति वसन्त, गर्मी, शरद र जाडो मा एक पारी छ। यी चार asonsतुहरूको क्रममा, मानिस, जनावरहरू र बोटबिरुवाहरू बढ्दछ र क्षय हुन्छन्, पृथ्वीमा फर्कन्छन्। जापानले बुझेको छ कि मानिसहरु प्रकृतिमा अल्पकालीन हुन्छन्। हामीले यसलाई धार्मिक र साहित्यिक कार्यहरूमा प्रतिबिम्बित गरेका छौं। जापानी मानिसहरु लगातार कुराहरु बदल्छन्, "Mujo"। यस पृष्ठमा, म तपाईंसँग मुजोको विचार छलफल गर्न चाहन्छु। विषयसूची जापानले धेरै प्राकृतिक प्रकोपहरूको सामना गरिसकेको छ जापानले अझै प्रकृतिलाई मन पराउँदछ र जापानले धेरै प्राकृतिक प्रकोपहरूको अनुभव गरेको छ जापानी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त शहर। = शटरस्टक जापानले धेरै प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तै ठूलो भूकम्प, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, र अधिकको अनुभव गरेको छ। नतिजा स्वरूप, हामी राम्ररी जान्दछौं कि चीजहरू स्थायी छन्। जापानी द्वीपसमूह भूकम्पको क्षतिको जोखिमको लागि भयानक क्षेत्र हो। धेरै मानिसहरू समुद्री तटमा बस्छन्, त्यसैले जब ठूलो भूकम्प गयो तब प्रायः सुनामीको क्षति हुन्छ। तपाईं जापानी द्वीपसमूह मा धेरै ज्वालामुखीहरु पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसैले जापानी मानिस प्राय: ज्वालामुखी विस्फोट क्षतिको पनि अधीनमा छन्। ज्वालामुखी विष्फोटले पनि कृषिलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ र यसको परिणाम स्वरूप मानिसहरू भोकमरीबाट ग्रस्त भएका छन्। यी कारणहरूले गर्दा जापानी जनता प्रकृतिको डरसँग परिचित छन्। मानिसहरुले प्रकृतिको शक्तिलाई हराउन सक्दैन। यस तरीकाले जापानी मानिसहरु विश्वास गर्छन् कि सबै चीजहरु ईफिमेरल हो। यस दर्शनले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्न धेरै मन्दिर र मन्दिर निर्माण गर्ने चलन स्थापित गरेको छ। जापानीहरूले अझै प्रकृति मन पराउँछन् र सीनरी सीन छन् ...
के तपाईंलाई मार्च ११, २०११ मा ग्रेट इस्ट जापान भूकम्पको बारेमा याद छ? भूकम्प र सुनामीमा १ hit,००० भन्दा बढी मानिस मरे जसले जापानको टोहोकु क्षेत्रमा प्रहार गरे। जापानीहरु को लागी, यो एक त्रासदी हो जुन कहिले भुल्दैन। हाल, तोहोकु क्षेत्र द्रुत पुनर्निर्माण भइरहेको छ। अर्कोतर्फ, प्रकोप क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या बढ्दो छ। यात्रुहरूले प्रकृतिको डर महसुस गर्छन् जसले धेरै व्यक्तिको जीवन लुट्यो र एकै साथ तिनीहरू आश्चर्यचकित भए कि प्रकृति कति सुन्दर छ। पीडित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले प्रकृतिको डर याद राख्नुपर्दा, उनीहरूले प्रकृतिले उनीहरूलाई धेरै अनुग्रह र पुनर्निर्माणको लागि कडा मेहनत गरेको कुराको कदर गर्दछन्। यस पृष्ठमा, म सान्रिकु (तोहोकु क्षेत्रको पूर्वी तट) लाई परिचय दिनेछु, जुन विशेष गरी तोहोकु जिल्लामा भारी क्षति भएको थियो। त्यहाँ, कोमल हेराईमा फर्किएको सागर एकदमै सुन्दर छ, र कडा बस्नेहरूको मुस्कान प्रभावशाली छ। किन तपाईं टोहोकु क्षेत्र भ्रमण गर्नुहुन्न (विशेष गरी Sanriku) त्यस्ता बासिन्दाहरूलाई भेट्न? सामग्रीको तालिका सुनामीले धेरै शहरहरूलाई पूर्णरूपले ध्वस्त गर्यो मिकी जो टाउकोको क्षेत्रको पुननिर्माणको लागि मरेका थिए स्रीकु प्रकृति अझै सुन्दर छ र मान्छे मैत्री छन् सुनामीले धेरै शहरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त गर्यो ग्रेट ईस्ट जापान भूकम्प मार्च ११, २०११ = शटरस्टक १ 11::2011 मा मार्च ११, २०११, भूकम्पले एक क्षणमा तोहोकु क्षेत्रमा शान्तिमय जीवनलाई हटायो। त्यस समयमा मैले टोकियोमा एउटा अखबारको कम्पनीमा काम गरें। म सकिएको थियो ...